उच्च घटाउन योग्य स्वास्थ्य योजना (HDHP) पेशेवरहरू र विपक्षहरू - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर खेलहरु कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस भारी खेल स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कल्याण समाचार कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी >> एक उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना के हो?
स्वास्थ्य बीमा हुनु आवश्यक छ, तर यो सधैं सस्तो हुँदैन। कम प्रस्ताव गर्ने योजनाहरूको लागि प्रीमियम घटाउन योग्य र कम जेकेट खर्च धेरैका लागि सम्भाव्य हुँदैन। उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना दुबै तपाईं पैसा बचाउन र परम्परागत स्वास्थ्य योजनाहरु भन्दा बढी लचिलोपन को लागी अनुमति दिन सक्छ। यहाँ साईन अप गर्नु अघि तपाईले जान्नुपर्ने सबै कुरा छ।
उच्च घटाउन योग्य स्वास्थ्य योजनाहरू (एचडीएचपीहरू) बीमा योजनाहरू हुन् जुन तपाईं परम्परागत कभरेजको साथ अधिक कटौती योग्य हुन्छन्। यसको मतलव तपाईले बीमा कम्पनीले तपाईलाई हेरचाहको लागत साझा गर्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले वर्षको शुरुमा तपाईको आफ्नै जेबबाट स्वास्थ्य सेवाको लागि अधिक तिर्नु पर्छ। तपाईंसँग सामान्यतया छैन परम्परागत copyayment , या त; तपाईंले आफ्नो वार्षिक कटौतीयोग्य पूरा नगरेसम्म तपाईं 100% मा जेबबाट भुक्तानी गर्नुहुनेछ। सिक्केन्समा अपवाद हो रोकथाम देखभाल , जुन पूरा कवर गरिएको छ सस्ती केयर ऐन (एसीए) द्वारा रेखांकित रूपमा। यी योजनाहरु स्वास्थ्य बचत खाता (HSA) को साथ जोडी गर्न सकिन्छ त्यसैले केहि चिकित्सा खर्चहरू कर मुक्त रहित भुक्तान गर्न सकिन्छ।
IRS एक मा उच्च घटाउन स्वास्थ्य योजनाहरु को परिभाषित गर्दछ अधिक विस्तृत स्केल : कटौती योग्य एक व्यक्ति योजनाको लागि न्यूनतम4१4०० वा परिवार योजनाको लागि $ २,8०० हुनुपर्दछ, र वार्षिक आउट-अ-पॉकेट खर्च एकल व्यक्तिको लागि $,, 00०० वा परिवारको लागि $ १,,8०० भन्दा बढी हुन सक्दैन। सीमा, यद्यपि, लागू हुँदैन यदि तपाईं नेटवर्क अफ-सर्भिस सेवाहरू प्राप्त गर्नुभयो भने।
HDHPs पनि लोकप्रिय छन् - ती मानक दोस्रो PPO स्वास्थ्य योजना पछि दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय योजना हो। यस अनुसार २०१ Ka कैसर परिवार फाउंडेशन नियोक्ता स्वास्थ्य लाभ सर्वेक्षण , Employed०% रोजगारदाताले एचएसए विकल्पको साथ उच्च घटाउन योग्य स्वास्थ्य योजनामा ​​भर्ना गर्न छनौट गरे। त्यो संख्या बिस्तारै बढ्दैछ, जबकि मानक पीपीओहरू कम लोकप्रिय भइरहेका छन्।
HDHP योजनाहरू कसरी काम गर्छन्?
जब तपाईंसँग एक उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना छ, तपाईंसँग मानक चिकित्सा बीमा छ — तपाईं केवल कम मासिक प्रीमियम र उच्च जेब लागतको साथ एक भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ। सिक्शन्स प्रतिशत । एक व्यक्ति को लागी, तपाईं डाक्टर भ्रमण, परीक्षण, र उपचार को लागी १००% खर्च तिर्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं आफ्नो कटौती योग्य नपुग्नु हुन्छ। त्यसो भए तपाईको बीमामा किक हुन्छ (यो दर तिर्ने दर वा प्रतिशतले योजना अनुसार फरक हुन्छ) तपाईले आफ्नो पकेटबाट अधिकतममा पुग्नु हुन्न। एकचोटि तपाईंले त्यो पूरा गर्नुभयो भने, बीमा पूर्ण रूपमा सबैको लागि भुक्तान गर्दछ (तपाईंले प्रयोग गर्ने प्रदायकहरू तपाईंको नेटवर्कमा छन् भनेर मान्दै)।
Co Co urance बीमा दर योजना फरक हुन सक्छ, त्यसैले बीमा सामग्री जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस् आफ्नो दर पाउन।
यदि तपाइँ HSA लाई तपाइँको बीमा संग जोडी छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ वा तपाइँको रोजगारदाताले खातामा योगदान पुर्‍याउनुहुनेछ जुन अन्य मेडिकल खर्च करमुक्तको लागि भुक्तान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक व्यक्ति को रूप मा, तपाईं contribute 3,550 सम्म योगदान गर्न सक्नुहुन्छ; परिवारहरूले contribute 7,100 सम्म योगदान गर्न सक्दछ। रोजगारदाताहरूले प्राय: तपाइँको शीर्षमा HSA योगदानहरू गर्दछ, जसले गर्दा तपाइँ सामान्यतया सबै पैसाको लागि तपाइँको चेकमा भर पर्नु पर्दैन - तर सँगै, नियोक्ता र कर्मचारी अधिकतम भन्दा बढी हुन सक्दैनन्।
सम्बन्धित: Health स्वास्थ्य सेवाहरू तपाईंले आफ्नो कटौती योग्य पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने
के तपाइँ tamiflu लिँदा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ
के HDHPs प्रिस्क्रिप्शनहरू कभर गर्दछ?
किनभने उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजनाहरू अक्सर परम्परागत स्वास्थ्य बीमाको समान लाभहरूको साथ आउँदछ, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सलाई स्वास्थ्य देखभालको रूपमा नै सिक्सेन्सरीले छोप्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईको प्रिस्क्रिप्शनको पुरा लागत १० डलर पर्छ भने तपाईले कटौती योग्य नहुन्जेल तपाईले तिर्नुहुनेछ, र त्यसपछि तपाईले $ २ भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ, तर बीमा सधैं यस्तो हुँदैन, केहि एचडीएचपीको संयुक्त मेडिकल र फार्मेसी हुन्छ कटौती योग्य जबकि अन्य छैन। तपाईको योजना कागजातहरू र सुत्र जाँच गर्नुहोस् तपाईको व्यक्तिगत तवरले सहि मात्राहरू हेर्नका लागि।
एक उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना का फाइदा के हो?
एक उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना को प्रमुख लाभ? यो तपाईको खल्तीबाट कम पैसा हरेक महिना हुन्छ यदि तपाई स्वास्थ्य सेवा सेवाहरू बारम्बार प्रयोग गर्नुहुन्न, वा होईन। प्रीमियमहरू परम्परागत स्वास्थ्य योजना भन्दा कम छन्। र यदि तपाईं धेरै पटक डाक्टर जानुहुने छैन, वा तपाईंसँग केही आश्रितहरूको सानो परिवार छ भने त्यो एकदम ठूलो पर्क हो। साथै, यदि तपाईं एचएसएमा पर्याप्त जम्मा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले लाग्ने कुनै पनि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चहरूको लागि भुक्तान गर्न तपाईंले पहिले नै पैसा छुट्याउनुहुनेछ।
बेफाइदा के हो?
कम प्रीमियम र उच्च घटाउन योग्य हुनु सतहमा राम्रो चीज जस्तो लाग्न सक्छ यदि तपाईं प्रायः डाक्टरकहाँ जानु हुन्न, तर यसले तपाईंको विरूद्ध पनि काम गर्न सक्दछ। यदि तपाईंसँग कार बिग्रिएको छ वा तपाईंको मुटुको धडधड बढेको छ भने, उदाहरणका लागि, तपाईंले डाक्टरको अगाडि यो रोग निदान र उपचार गर्ने अपेक्षा गरेभन्दा बढी जान सक्नुहुन्छ - जुन तपाईं आफ्नो कटौतीयोग्य पूरा गर्नुभएन भने, तपाईंलाई धेरै खर्च गर्ने निम्त्याउँछ। परम्परागत स्वास्थ्य योजनाको तुलनामा भ्रमणमा बढी पैसा।
कसरी तपाइँ तपाइँको स्वास्थ्य सेवा हेरचाह मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ नराम्रो भन्दा अन्त मा तपाईं अन्यथा भन्दा अन्त मा अन्त सक्छ। एक अक्टुबर २०१ study मा अध्ययन स्वास्थ्य मामिला देखाईयो कि उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजनाहरू भएका बिरामीहरूले सिफारिस गरिएको स्क्रीनिंगहरू प्रायः छोड्छन् र आपतकालीन कोठामा चीजहरूको लागि प्रयोग गर्दछ जसका लागि सामान्यतया आपतकालीन कोठा भ्रमण आवश्यक पर्दैन। प्लस, क मिशिगन विश्वविद्यालयबाट २०१ from सेतो कागज देखाए कि दीर्घकालीन मुद्दाहरू भएका बिरामीहरूले उनीहरूले सक्दो बढी तिर्ने डरमा प्रायः डाक्टरलाई पूर्ण रूपमा छोडिदिए।
भनिएको छ, यदि तपाईं कम प्रीमियमको बदलामा उच्च कटौती योग्य योजनाहरूसँग सम्बन्धित सम्भावित अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा लागतहरूको लागि भुक्तान गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, र तपाईं योजनालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ चिन्तित हुन धेरै नहुन सक्छ।
के HDHP पीपीओ भन्दा राम्रो छ?
TOपीपीओ योजनाPreferred वा रूचाइएको प्रदायक संगठन the मानक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रकारहरू मध्ये एक हो। उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजनाहरू जस्तै तपाईंसँग इन-नेटवर्क र नेटवर्क प्रदायक दुबै छ। नेटवर्क अफ-नेटवर्क प्रदायकहरूले हेर्नको लागि अधिक लागत। दुबै योजनाहरू सामान्यतया उहि चीजहरूलाई समाहित गर्दछ, तर पीपीओ योजनाहरूसँग प्राय: कम प्रीमियम जोडी कम कटौतीयोग्य र एचडीएचपीहरू भन्दा बाहिरको जेब लागतसँग जोडिन्छ। साथै, पीपीओको साथ, तपाईं सामान्यतया आफ्नो बीमा कभरेजको साथ एक HSA को फाइदा लिन सक्नुहुन्न।
एचडीएचपी वा पीपीओ योजना बीचको निर्णय तपाईं डाक्टरलाई कति पटक भेट गर्नुहुन्छ भन्नेमा पर्दछ। एक पीपीओ उत्तम हुन सक्छ यदि तपाईं अधिक अग्रिम भुक्तान गर्न सहज हुनुहुन्छ र नियमित रूपमा डाक्टरलाई भेट्न जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, पुरानो सर्तहरु को लागी अक्सर डाक्टरको भेटहरु आवाश्यक हुन्छ। यदि तपाईं बरु महिनाको बढी पैसा बचत गर्न चाहानुहुन्छ र हेल्थकेयर मुद्दाहरूको आशा गर्नुहुन्न भने, एक HDHP राम्रो हुन सक्दछ।
मैले HSA पाउनु पर्छ?
स्वास्थ्य बचत खाताले तपाईंलाई थोरै आर्थिक बढावा दिन्छ जब तपाईं एचडीएचपीको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ कसरी कार्य गर्दछ भन्ने छ। प्रत्येक महिना, एक पेरोल कटौतीले तपाईंको HSA मा पैसा राख्छ। यदि तपाईंसँग काम मार्फत बीमा योजना छ भने, सम्भव छ तपाईंको नियोक्ताले एचएसएमा पनि योगदान दिन सक्दछ।
HSA पैसा तपाईको लागि डेबिट कार्ड वा चेकको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि उपलब्ध छ। जब तपाईले भुक्तान गर्नुहुन्छ योग्य चिकित्सा खर्च - कटौतीयोग्यहरू जस्तै, कपिजाहरू, दन्त कार्यहरू, चश्मा, एक्यूपंक्चर, प्रिस्क्रिप्सन, अझ बढी-काउन्टर औषधिहरू - तपाईं कार्ड वा चेकको साथ त्यसो गर्नुहुन्छ।
यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं सामान्यतया आफ्नो HSA को साथ प्रीमियमहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न, यद्यपि केही अवस्थाहरूमा, कोबरा प्रीमियम र चिकित्सा बीमा बेरोजगारीमा हुँदा भुक्तान गरिन्छ प्रतिपूर्ति गर्न सकिन्छ खाता मार्फत। क्यालेन्डर वर्षको अन्त्यमा, तपाईंसँग खातामा जे पनि उपलब्ध ब्यालेन्स अर्को वर्षमा रोल रोल हुन्छ।
दुर्भाग्यवस, सबैजना छैनन् योग्य HSA को लागी। तपाईंसँग एक योग्य उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना हुनु आवश्यक छ जुन माथिको आईआरएस दिशानिर्देशहरू द्वारा उल्लिखित छ। यदि तपाइँको रोजगारदाता HSA प्रस्ताव गर्दैन, तपाइँ एक निजी कम्पनी बाट एक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ - तर अझै मात्र एक योग्य स्वास्थ्य बीमा योजना संग। ध्यानमा राख्नुहोस् कि सबै एचडीएचपीहरू एचएसएका लागि योग्य हुँदैनन्। यदि तपाईं 65 65 भन्दा बढि र मेडिकेयरमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं HSA खोल्न असक्षम हुनुहुन्छ। तपाईं पहिले नै भएको एकमा योगदान गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ।
प्रि-टैक्स खरीदहरू मात्र पाउनु भन्दा पछाडि HSA का केही फाइदाहरू छन्। तपाईं खातामा वा HSA- योग्य खर्चहरूमा करहरू भुक्तान गर्नुहुन्न। तपाइँको पेचेकबाट सीधा योगदान पुर्‍याउँदा तपाइँले कर लिने अनुमति दिनुहुन्छ जस्तो कि तपाइँ कम पैसा बनाउनुहुन्छ (तपाइँको तलब माइनस राशि जुन तपाइँले वर्षमा योगदान गर्नुभयो)। र, तपाईले आफ्नो पैसा HSA मा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ बरु चिकित्सा खर्चमा प्रयोग गर्नु भन्दा।
यदि तपाईंले HSA प्राप्त गर्नुभयो भने, त्यहाँ केहि सम्भावित डाउनसाइडहरू छन् जसका बारे तपाईंलाई सचेत हुनुपर्छ। सरकारले तपाईलाई एचएसएमा कती योगदान पुर्‍याउन सक्छ भनेर निर्देशन छ। यस अनुसार भर्खरका नम्बरहरू IRS बाट, व्यक्तिले मात्र $ 3,550 सम्म योगदान गर्न सक्दछ। परिवारहरू मात्र contribute 7,100 सम्म योगदान गर्न सक्षम छन्। भाग्यवस ती मात्राहरू सम्बन्धित न्यूनतम कटौती योग्य भन्दा दोब्बर हुन्छन्। यदि तपाईं पर्याप्त बचत गर्नुभएको छ भने, तपाईं ती सबै लागतहरू कभर गर्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं यो पूरा गर्नुहुन्न।
गर्भवती हुँदा दुखाई को लागी के लिने?
एक HSA लाई नकारात्मक अन्य हो कि यो वास्तवमा मात्र चिकित्सा लागत को लागी हो। तपाईं त्यो पैसा कुनै पनि गैर-योग्यता खरीदहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्न, वा अन्यथा तपाईं यसमा आयकर तिर्न जिम्मेवार हुनुहुनेछ। यदि तपाईं than 65 बर्ष भन्दा कान्छी हुनुहुन्छ र यो पैसा गैर-मेडिकल खर्चको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईले आयकरको माथि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। जे होस्, यदि तपाईं 65 65 भन्दा बढि उमेरको हुनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि चीजको लागि पैसा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र इराबाट तान्ने जस्तामा कर लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि त्यस पैसाको बचत गर्नुहोस् र बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्नुहोस्।
सम्बन्धित: HSA बनाम FSA बनाम HRA
एकलकेयरले कसरी मद्दत गर्न सक्छ
तपाईले आफ्नो कटौतीयोग्य नबढुन्जेल तपाईले नुस्खाहरूको लागि उच्च लागत तिर्नुहुनेछ, त्यसैले वरिपरि किनमेल गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा तपाईले पाउनुहुनेछ कि एकलकेयर कूपनको प्रयोगले सिक्काइन्स रेट तिर्ने भन्दा बढी बचत गर्न सक्दछ। जब एकलकेयर वा कुनै अन्य छुट कार्डहरू प्रयोग गर्दा, त्यो रकम तपाईंको कटौतीयोग्यमा लागू हुँदैन। यद्यपि यसले तत्काल तपाईंको पैसा बचाउनेछ। अब singlecare.com मा तपाइँको पर्चाहरूको लागि खोजी सुरू गर्नुहोस्।
योजना बी गोली कसरी काम गर्दछ
कुन तापक्रम मा यो ज्वरो हो
Bragg को स्याउ साइडर सिरका तपाइँको लागी राम्रो छ
योजना बी लिए पछि असुरक्षित यौन सम्बन्ध थियो
मेरो नजिक क्लिनिक मा हिँड्नुहोस् कुनै बीमा छैन
बीमा बिना चेकअप लागत कति हुन्छ?